Mega Pack ee ilaha loogu talagalay Adobe Photoshop Bilaash | Abuurista khadka tooska ah
Ma rabtaa inaad dib u cusboonaysiiso buuggaaga kaydka ah ee 'Photoshop'? Waxaan kuu fududeyneynaa adiga, maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa xirmo hadiyado aad u kala duwan oo loogu talagalay Adobe Photoshop. Naqshad kasta waxay u baahan tahay xoogaa qalab ah soojeedin walbana waxay u baahan tahay nooc qalab ah. Xirmada xigta waxaad ka heli doontaa gradients, swatches, fonts, textures, nidaamyada, xitaa qaababka iyo burushyada. Tilmaamaha lagu rakibayo waa kuwo aad u fudud:
Marka hore waa inaan kala soo bax xirmadayada qaab .rar ah ka yimid madal Google Drive si hadhow loo kala furfuro oo loo rakibo qayb kasta. Markaan sidan yeelno, ku rakibiddu waxay noqon doontaa mid aad u fudud:
50 Ilaha: Si loo rakibo waa inaan nuqul ka dhignaa feylasha ku jira galka Fonts ee dariiqa soo socda: Bilow> Guddi Xakameyn> Fonts (on Windows). Sidaad ogtahay, noocyadaasi waxay ka muuqan doonaan dhammaan barnaamijyada adeegsada aaladda qoraalka.
59 xirmo oo burush ah: Buraashka tab> Ikhtiyaariyada (calaamadda qalabka)> Maamulaha hore "Burush badeed". Waxaan dooran doonnaa meesha aan ka siibnay buraashka oo aan xulan doonnaa. Baakad kasta waxay ka kooban tahay dhowr buraash waana inaad mid mid u buuxisaa.
1 Isugeyn Xidhmo: Maareeyaha Hore> Sawiro> Xamuul. Waan baari doonnaa meesha aan ka siibnay xirmadeena waana dooran doonnaa si kasta oo ay tahay. Muunado ayaa ku anfacaya si loo abuuro thumbnails tusaale ahaan.
Xirmooyinka Gradient: Maareeyaha Hore> Saacadaha> Load. Waxaan raaci doonnaa isla nidaamkii aan raacnay qalabkeenna kale.
Xirmooyinka Style 10: Maamulaha hore "Noocyada" Load. Noocyadu had iyo jeer way ku habboon yihiin inay ka shaqeeyaan qaabeynta qoraalka, tilmaamaha, qoraalka ...
Xirmooyinka Qaabka 1: Maareeyaha Hore> Qaababka> Xamuulka. Mawduucyada sidoo kale waxaa badanaa loo yaqaan Qaabab waana sawirro si aan dhammaad lahayn loogu celceliyo dusha sare ee aan dooneyno.
1 Xirmo qaabeed: Waxaan ku soo dari doonaa xirmadan qeybta sababaha waxaanna raaci doonaa isla nidaamkii aan raacnay si aan ugu soo galino sababaheena.
Ma rabtaa inaad hesho miirayaasha Photoshop? Xidhiidhka aan hadda ka tagnay waad ka heli kartaa iyaga.
Ha walwelin, ma ilaawin iskuxirka soo dejinta xirmada oo dhan Kheyraadka loogu talagalay Photoshop waanu kuu sheegnay. Waad soo dejisan kartaa lacag la’aan ka socota xiriirka soo socda: Mega Pack oo loogu talagalay Adobe Photoshop.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Mega Pack ee kheyraadka loogu talagalay Adobe Photoshop Bilaash
Download lama heli karo!
Jawaab David Londono
Nabadeey David, waxaan hubiyey cinwaanka waana la heli karaa aniga :) Isku day mar kale, badhanka "soo degso" ee ka hooseeya "Muuqaalka muuqaalka lama heli karo"
Waad salaaman tihiin, horeyba waan ula soo degay xirmooyinkoo dhan oo aad ayey u wanaagsan yihiin :) Shakiga ayaa ku jira halka Adobe Photoshop CS6 galka uu baakadahaasi tagayo, maadaama haddii aan tirtiro ay baabi'i doonaan.
Xirmooyinka ayaa ku jira galka kasta, waxaad uun galaysaa sawir-gacmeedka oo aad dooraneysaa aaladda aad rakibayso, tusaale ahaan Buraashyada, adigaa dooranaya oo waxaad siineysaa qalabka ku yaal geeska miiska burushyada, waxaad siisay Xamuul oo raadso burushyada la soo dejiyey
Ku jawaab Anderson
Haddii la heli karo, horay ayaan u hubiyey oo baakadka aad ayuu u wanaagsan yahay, mahadsanid iyo salaan!
Jawaab Eduardo Bornemann
xirmo aad u wanaagsan mahadsanid
Wax ku biir aad u fiican: Aad ayaad u mahadsantahay
Waad ku mahadsantahay akhrinta Ally, salaan;)
mahadsanid waa caawimaad aad ufiican
Aad baad u mahadsantahay, waad fiicantahay!
Jawaab Malaga 512
Waad ku mahadsantahay faalladaada. Waa wax lagu farxo :)
Ku jawaab Cindy
Waad ku mahadsantahay xirmada… su'aal kaliya, ilahaani sidoo kale waa lagu dari karaa nidaamka Mac ??
Ku jawaab Polphin
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay
Jawaab Lucy Rojas
Waad ku mahadsan tahay joojinta!
Aad baad u mahadsantahay, soo degsataa
Ku jawaab Francisco Arcia
Qaali wax ku ool ah walaal..Waad mahadsan tahay, waxaan rajeynayaa wax ku darsasho intaa ka badan !!!!
Ka jawaab kakyo
Fernando Ramirez sawir-haye dijo
Aad baad u mahadsan tihiin, waxaan kala soo degsanayaa dhib la'aan. Iyadoo aan loo eegin inaad isticmaasho dhammaantood ama aadan isticmaalin, marwalba waa inaad u mahadcelisaa dadka adiga oo kale ah kuwaas oo waqti iyo deeqsinimo ku qaata inay soo rartaan noocyadan ilaha ah si ay u taageeraan dadka isticmaala guud ahaan. Wacan wanaagsan !!
Jawaab Fernando Ramirez
Walaal, waad ku mahadsan tahay malyan ka qayb qaadashada weyn, eebbe ha kuu siiyo adiga iyo adigaba
Nicolas Cadvico dijo
Aad baad u mahadsantahay !! La soo dejiyey oo la tijaabiyay!
Jawaab Nicolas Cadavico
Waxay u hartay in la dhigo tixraacyada buug-gacmeedka, wax ku biirinta wanaagsan!